Hakana 2 tapitrisa Ar ny iray…: tratra ireo mpanondrana vehivavy mankany Arabia Saodita sy Koweit | NewsMada
Par Taratra sur 09/04/2021
Naiditra am-ponja rehefa avy natolotra ny fitsarana (PAC), ny zoma 2 avrily 2021 lasa teo ny telo amin’ireto mpanondrana vehivavy mankany Arabia Saodita sy Koweit. Hakan’izy ireo vola 2 tapitrisa Ar ny vehivavy iray ka ao Kaomoro ny fiaingana mihazo ny tany Arabo…
Tsy mety fay ! Tambajotra iray mpanondrana vehivavy hiasa amin’ireo firenena Arabo ireto ravan’ny polisim-pirenena avy ao amin’ny services central des enquêtes spécialisées (SCESLFD), ny 29 marsa teo. Dimy izy ireo no ao anatin’ity tambajotra mpanondrana vehivavy mankany ivelany ity. Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny polisy vao naheno ny loharanom-baovao ka dimy ireo tompon’antoka tamin’ilay fanondranana. Voasambotry ny polisy teny Anosy, Ampitatafika ary Itaosy, hatramin’ny alarobia 31 marsa teo ireo vehivavy telo saika haondrana an-tsokosoko any ivelany. Nohadihadiana teny amin’ny polisy izy ireo ka nilaza fa avy any amin’ny faritra Andapa. Vehivavy iray no nandresy lahatra azy ireo ka roboka tokoa. Nampian-trano azy ireo teto an-drenivohitra io vehivavy io ary nikarakara taratasy hosoka, hamitahana ny fanjakana momba ny anton-dian’izy ireo any ivelany.
Miainga ao Kaomoro ireo olona haondrana…
Nampandoaviana vola 2 tapitrisa Ar avy ireto tovovavy ireto. Nohamafisin’ny polisy fa vitan’izy ireo avokoa ny mamorona kara-panondro, kopia ary pasipaoro sandoka ho azy telo vavy. Nokasaina halefa atsy Kaomoro izy ireo ary efa misy mandray sy mandefa any ivelany nefa izao tratra izao. Sarona tao an-tranon’ireto mpanondrana olona ireto ny taratasy hosoka marobe. Nahitana fitombokasen’ny masoivoho ao Kaomoro koa. “Maro ireo mpiray tsikombakomba amin’izy ireo karohina”, hoy ny polisy. Tsikaritra fa tena mafy loha ny vehivavy sasany na efa iaraha-mahita izao aza ny manjo ireo miasa any amin’ny tany Arabo. Vao tamin’ity herinandro ity no nisy ilay vehivavy maty tany Koweit, nefa ireto mikasa hivoaka indray. Mahita lalana ambanin’ny tany miainga eto, saingy rehefa tonga any, tratran’ny herisetra sy ny fampijaliana. Mifanome tsiny sy mifanilika andraikitra eto daholo!